Ivenkile yesithathu ye-Apple eMexico kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini | Ndisuka mac
Ivenkile yesithathu ye-Apple eMexico kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini
Ukuvulwa kweevenkile zeApple ngeli xesha lokukhula okukhulu. I-2106 ibingomnye weminyaka kunye nokuvulwa okukhulu kweVenkile yeApple. Kodwa unyaka ka-2017 awubuyi mva, Isicwangciso kwezi nyanga zidlulileyo ibikukuvula iivenkile kwiimarike ezinokumelwa okuncinci ngokwenani leevenkile zeApple. Ke, ukuwa kokugqibela bavule ivenkile yokuqala eMexico kwaye ngoku babhengeza eyesithathu. Ngeli xesha indawo entsha yiSan Luis Potosí, apho namhlanje ungabona ilogo yeapile elilumkileyo enomyalezo olandelayo: "Iyeza kungekudala"
Indawo ekuyo iya kuba yiZiko leeNtengiso, e-El Dorado. Lelinye lamaziko aphambili okuthenga kule ngingqi, enesakhiwo esitsha, ikakhulu ngaphandle nangaphezulu. Ivenkile yeApple inevenkile enkulu egcinwe embindini wesakhiwo. U-Apple akakaqinisekisi kwiwebhusayithi yakhe ukuvulwa kwale ndawo intsha. Kuyabonakala ukuba ugxile ekuqeshweni kwabasebenzi kulwakhiwo kunye nokufumana ivenkile.
U-Apple wenze isigqibo soku iivenkile ezivulekileyo eMexico ngeyeSilimela ngo-2016. Ukongeza, kwinyanga nje ephelileyo, sifunde malunga nokuvulwa kwesitolo sesibini sophawu lwentengiso elizweni, Indawo yokuthenga yeAntara yeHolo, Ivenkile esele isakhiwa.
Yindawo entsha, apho kungakhange kubekho uphawu ngaphambili. Kungenxa yoko imilinganiselo efanayo ayaziwa kwaye kunzima ukwazi ukuba yeyiphi ifomathi evenkileni eya kuba nayo Nje ukuba ifumaneke yokuvulwa. Ukuzibophelela kuka-Apple kwiivenkile ezibonakalayo kuyinyani. Kwezi nyanga zidlulileyo siye sayazi inzala yenkampani kumazwe akuMzantsi Merika, afana neBrazil neArgentina. Ukongeza, inesicwangciso endaweni yokulungisa kwakhona iVenkile yeApple, esele ineminyaka engaphaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ivenkile yesithathu ye-Apple eMexico kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini
Yonwabela ukutya kwevegan nge-Emilia's Vegan Recipe Mac app